Soth korea Oo Si Qaabdaran Ureeebtay Xulka Qaranka Germalka,Guul aan Faaida Ugu Jirin Ku Reebtay Germalka/ | JAALENEWS
Soth korea Oo Si Qaabdaran Ureeebtay Xulka Qaranka Germalka,Guul aan Faaida Ugu Jirin Ku Reebtay Germalka/
Jarmalka wuxuu noqday xulkii afaraad ee kasoo jeeda yurub isla markaana isaga haray group-ka isagoo difaacanaya waxaana kaga horreeyay France (2002), Italy (2010) iyo sidoo kale Spain (2014).
Labada xul ayaa ku dhameystay 90-ka daqiiqo gool la’aan, balse wiilasha difaacdayaasha ayaa ku naf-waayay daqiiqadahii lagu daray ciyaarta waxaana looga dhaliyay laba gool oo ay kala dhaliyeen Young-Gwon Kim iyo Heung-Min Son, waxeyna ku yimaadeen laba qalad oo ay sameeyeen ciyaartoyda Jarmalka.
Waqtigii dhimashada ayuu Toni Kroos sabab u noqday iney South Korea helaan gool loo baahday in VAR lagu fiiriyo, Young-Gwon Kim ayaana ka faa’ideystay oo qalbi jabiyay xulka difaacanayay tartanka.
Mar kale ayey Jarmalka qalad galeen markii Manuel Neuer uu weerar tagay si uu xulkiisa u badbaadiyo, Se-Jong Joo ayaa kubad ka dafay goolhayaha Bayern Munich ka hor inta uusan meel dheer ka caawin Heung-Min Son.
Natiijada waxey noqotay mid ku dhamaata 2-0, oo ay guusha ku raacday qaranka South Korea oo la hartay Germany.
Dhanka kale Sweden ayaa iska xaadirisay wareega 16-ka kadib markii ay si daran u xasuuqeen Mexico – laba gool oo ay kala dhaliyeen Augustinsson, Granqvist iyo gool uu iska dhaliyay Edson Alvarez ayaa natiijo u fiican xulka reer Yurub u sahlay.
Sweden waxey soo bandhigeen qaab ciyaareed aan caadi aheyn oo ay awood dheer ugu sheegteen Mexico, dhanka kale xulka waqooyiga America ka yimaada ee Mexico ayaan wax dhibaato ah kala kulmin natiijadaas maadaama Jarmalka ay guuldareyteen.
Si kastaba Mexico iyo Sweden ayaa kasoo baxay group E iyadoo Jarmalka iyo South Korea ay isaga hareen tartanka.